काठमाडौं — आजकल तामाको भाँडोको प्रयोग कम हुन थालेको छ । वृद्धहरूले तामाको भाँडोमा हालेर पानी पिएको देख्नुभएको होला । तामाको भाँडामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यसका फाइदा यस्ता छन् :
कुकुरसँग खेल्ने बानी छ, यस्तो होला नि हालत
पराग र गुट्खाको लत छोड्ने यी हुन् घरेलु उपाय
यस्ता छन् जाडोमा तातो पानीले नुहाउँदाका फाइदा र ब...
एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष छान्न सकस- ओलीसँग भेटेर फर्किए पोखरेल, नेम्वाङले छाडेनन् दाबी
टर्कीमा उत्खनन गर्दा भेटियो १४ हजार वर्ष पुरानो बस्ती
डिभोर्समा पत्नीले १ करोड मागेपछि यी युवाले गरे आत्महत्या, स्कुटीको डिक्कीमा भेटिएको सुसाइड नोटले खुलायो पोल
एमालेमा जनवाद सकियो, ओलीको ‘डनवाद’ शुरू भयो- गगन थापा
विवाह बन्धनमा बाँधिदै टिभिकी ‘नागिन’ मौनी रोय, कोसँग कहिले हुँदैछ बिहे ?
अस्ट्रेलियाले इन्टरनेट ट्रोलहरूका विरुद्ध घोषणा गर्‍यो युद्ध
१० बजे शुरू हुने भनिएको बन्दसत्र ४ घण्टा ढिला : ओली छलफलमा, प्रतिनिधि रनभुल्लमा !
कांग्रेसको निर्वाचन समिति संयोजकमा गोपालकृष्ण घिमिरे
पोर्चुगिज लीगमा नाटकीय खेल : नौ खेलाडीका साथ ओर्लियो बेलेनेन्सेस, बीचमै वाकओभर